တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရွေးချယ်ပါ | ယောဘသည် profile များကိုနှင့် USAHello ထံမှအလုပ်အကိုင်များစာရင်း | USAHello
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအလုပ်အကိုင်များအများအပြားကွဲပြားခြားနားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများကျော်ပြန့်နှံ့နေကြတယ်. USA တွင်အရေးကြီးသောန်ဆောင်မှုများပေးသမျှသောသူတို့ကဤအလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ။ ဆက်ဖတ်ရန်
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရရှိနိုင်ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောအလုပ်အကိုင်များရှိပါတယ်. ဆေးဝါးထုတ်လုပ်အလုပ်အကိုင်များအကြောင်းကိုလေ့လာပါ, ကားများ, အစားအသောက်နှင့်အဝတ်အစား။ ဆက်ဖတ်ရန်
ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီးထားပါ: အမေရိကန်အိပ်မက် | USAHelloအမေရိကန်အိပ်မက်: ဒါဟာလုပ်များစွာကိုအချက်များရှိပါသည်မရှိလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည် 50 နညျးလမျးမြားစှာစီကတခြားကနေကွဲပြားအမေရိကတိုက်၏ပြည်နယ်များ။
အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးအဘို့အ GoingUSA တွင်အလုပ်ရှာဖွေခြင်းအချိန်ကြာနိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးကဒုက္ခသည်တစ်ဦးကိုအလုပ်အင်တာဗျူးအဘို့အသွား၏သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေ. သူမသည် USA တွင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အလုပ်လုပ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။